18 May 1992: Si aad u garato halka lagu socdo, Wax ka ogow halka laga yimid: Qalinkii Mohamed Ali Bile | Haatuf Media Network
May 18, 2015 - Written by Admin Two
Sanadguuradii koowaad ee 18 May 1992 waxa an ku ciidey Madaxtooyada Soomaaliland. Heeso may jirin, try kooxina kamey tumeyn. Dad kooban oo gaadhaya ilaa 80 ayaa iskugu yimid. Hadalo kookooban mooyee wax kale mey jirin. Wax cunto ah lama cuneyn, abortion cabitaana muu jirin.
Waxa uugu darnaa, search madaxtooyada musqulaheedo wey wada gufeysmeyn oo mid keliya ayaa si fiican u shaqeyneysey, taasina madaxweynaha ayaa isticmaali jirey. Markaa haddii ay kaadi ku qabato waxa ad tegeysey ama guriga Hassan Ciise Jamac oo madaxtooyada ku dhex yaaley ama inta ad dibedda u www.pmstudionews.com baxdo ayaad ka wareegeysey maktabadda Masaarida oo ad ku soo kaadsheysey iliilad meesha u dhow. Magaaladu biyo mey laheyn, madaxtooyadana marna booyad ayaa u dhaamin jirtey marna biyooli dameer jiidayo ayaa u dhaamin jirey. Madaxda xafladda imaneysa badankoodu baabuur ma wataan ee waa la i use it brand cialis soo wada lugeyn jirey. Qof Soomaaliland joogey oo mushahar qaataa muu jirin marka laga reebo dhowr qof oo hey’ado u shaqeyn jirey mooyee. Madaxweynihii xiligaa iyo madaxweyne ku xigeenxiisii mudadii ay xilka hayeen illaa intii ay ka degeyeen bil keliya mushahar mey qaadan (waa wax aanad iminka maleyn kareyn)
Madaxtooyada wax shaqaale ah waxa joogey nin kuug (dabaakh) ah oo la odhan jirey Baafo oo reer Puntland ahaa, madaxweynaha ayaanu kuug u ahaa. Baafo waxa meesha kaga tegey Morgan oo uu kuugu u ahaan jirey. Kuugaa Morgan uunbaa madaxweynahana Kuug u ahaa. Madaxweynuhu wuxu lahaa hal waardiye (body guard) oo ahaa inan dhalinyaro ah oo la odhan jirey Abdirisaaq oo ay madaxweynaha qaraabo guud ahaayeen oo aan hore askari u buy cialis at a discount'>buy cialis at a discount soo aheyn. Halkaa waardiye ayuunbuu lahaa. Kuugga madaxweynaha iyo waardiyihiisu midna mushar mey qaadan jirin ilaa intii madaxweynuhu xilka ka degeyey.
Madaxweynuhu wuxu wadan jirey baabuur Ford ah oo uu siiyey nin la odhan jirey Mohamed Jamac Bootaan (Indha Case) oo ay madaxweynaha isku heyb guud uun ahaayen. Madaxweyne ku xigeenkii xiligaasi, Mudane Hassan Ciise Jaamac, gaadhi muu laheyn, Waardiyena muu laheyn, gurigiisu matoor leydh muu laheyn, kuugna muu laheyn. Wuxu ka soo lugeyn jirey madaxtooyada uu degenaa ilaa xarunta SOOYAAL agteeda si uu Bun uuga cabo makhaayad xeyraan meeshaa ku taaley oo daasado lagu fadhiisto. Markuu bunka nala cabo ayuu hadana dib uugu sii lugeyn jirey illaa madaxtooyada oo uu gurigiisu ku dhex yaaley.
Anigu caawa waxa an ku dabaaldegayaa meel u dhexeysa Ciraaq iyo Iran, mana joogo madaxtooyada oo an in badan ku soo dabbaaldegey, balse waan maleyn karaa waxa meesha ka dhacaya. Inta askari ee madaxweynaha ilaalineysa ee mushaharka qaadata, inta baabuur ee madaxtooyadu leedahay, waxa sharaab la isla dhacayo, waxa suudh la xidhanyahay iyo quruxda meeshaa ka muuqata.